National Match Organisation maka ụgbọ elu Metro na Istanbul - RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulNational Match Organisation maka ụgbọ elu Metro na Istanbul
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 Istanbul, ụgbọ okporo ígwè, General, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Metro, Turkey, tram 0
Ndokwa obodo mac maka ije metro na istanbul
Mbido Obodo maka Mgbakọ ụgbọelu na Istanbul. IMM, nke ga-egwuri on Friday mgbede na Turkey - Albania mba egwuregwu bụ n'ihi oge inyịme awa ụfọdụ ụzọ ụgbọ oloko e.
Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) oge Istanbul Metro okporo ígwè edoghi ejikwara site mmekọ ya bụ Friday October 11 21 awa: xnumx't nke ga-egwuri na Turkey - Albania e adi n'ihi na mba egwuregwu.
N'ihi egwuregwu bọọlụ M3 Kirazli-Olympic-Basaksehir, T1 Kabatas-Bagcilar, T4 Topkapi-Masjid-i Selam na F1 Taksim-Kabatas ahịrịla oge 01: 30 awa.
M1A Yenikapı-Atatürk n'ọdụ ụgbọ elu, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy na M6 Levent-Boğa un ga-agba-ọsọ-ya na-agbanyeghị-ga-akwụsị?
Ịhazi OEF Nyocha maka Metro Flights Izmir 02 / 06 / 2017 OEF Exam Regulations nke ụzọ ụgbọ njem na Izmir: Izmir Metro, 03 - 04 2017 Open University ga-ẹkenịmde on June ụbọchị (OEF) mara ọkwa udomo oro oge ruru Saturday na Sunday awa ga thicken. İzmir Metro, na Saturday, June 03, 06.00-06.30 10 n'etiti awa ohere nkeji, n'etiti awa nke 06.30-20.00 5 nkeji, n'etiti awa nke 20.00-00.20 10 nkeji na-ebu a mgbe. Na 04 06.00-07.00 on Sunday June n'etiti 10 nkeji na a oge, n'etiti awa nke 07.00-19.30 6 nkeji, n'etiti awa nke 19.30-00.20 10 ga-enwe na a nkeji.
Usoro nke Ramadan maka Metro Flights na Istanbul 06 / 05 / 2019 Istanbul Metropolitan Municipality, 'ọnwa nke Ramadan' n'ihi mgbanwe na oge nke ụzọ ụgbọ oloko wee gbanwee. N'elu okporo ígwè niile, a na-eme ka oghere mmeghe ruo 01.00, ebe Friday na Satọdee, a ga-agbasapụrụ 02.00. Dika okwu ederede nke Metro Istanbul; M1A Yenikapı-Atatürk Airport n'oge ọnwa Ramadan, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Olympic-Başakşehir, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 , T6 Topkapı-Mascid-i Selam na F1 Taksim-Kabataş ahịrị agbatịwo ya na ndokwa ahụ ma gbasaa ụgbọ elu ruo 4: 1 n'ụbọchị izu ụka na 01: 00 na Friday na Saturday. Ejiji, TF02 Maçka-Taşkışla ...
Ọhụụ Afọ Ọhụrụ maka ụgbọ oloko Uludag 28 / 12 / 2016 Christmas ndokwa nke cable ụgbọala Uludag oge: Bursa Cableway Inc. Özgümüş Burhan General Manager, Uludag na December 31 08.00 awa ruo echi kọrọ xnumx'y cable ụgbọ ala ọrụ ga-Iweputa. Burhan Ozgul Bursa Teleferik General Manager, oge oyi n'oge mmalite nke mmụba dị ịrịba ama na ikike njem, o kwuru. Özgümüş ga-eme ka ndị New Year Eve ndokwa pụrụ iche maka ndị na-achọ inwere ịbanye afọ ọhụrụ na elu ugwu na nke a, "USB ụgbọ ala, maka Christmas na Saturday, December 02.00 si 31 awa, ruo echi inye Iweputa ọrụ xnumx'y. Otú ọ dị, ọ bụrụ na achọrọ, anyị ga-anọgide na-ewepụ ndị njem
Ndokwa Krismas maka ọrụ ụgbọ ala na Bursa 31 / 12 / 2015 Nhazi afọ ọhụrụ na njem ụgbọ ala na Bursa: Dịka ndokwa nke BURULAŞ si kwuo, 31 Disemba - 1 January arụmọrụ ụgbọ ala ama ọkwa. Bursa ga-arụ ọrụ oge ọzọ maka afọ ọhụrụ ahụ. Kpee ebe a maka ỤBỤRỤ nwa
Erdoğan Arrangement for Bursaray Expeditions 21 / 10 / 2016 Erdoğan ndokwa maka ụgbọ elu Bursaray: Ememme ọhụrụ mere n'ihi na mmechi nke Şehreküstü ọdụ n'ihi na President Erdoğan nleta Bursa echi. Dika iwu nyere; Ogwe 22 Bursaray Şehreküstü ga-emechi mgbe 11.00 na October Saturday (YARIN). Nkụzi si na Labour na University ga-aga ọdụ ụgbọ mmiri Merinos. Rụọnụ ụgbọ okporo ígwè n'etiti Merinos na Osmangazi. Na-azụ site na ntụziaka nke Kestel ga-aga n'ọdụ ụgbọ mmiri Demirtaşpaşa. A ga-arụ ọrụ nkwụsị n'etiti ọdụ ụgbọ mmiri Merinos na Gökdere. Maka nke a: Ndị njem si mahadum gaa n'ọdụ ụgbọ Osmangazi, site n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè Merinosta gaa n'ọdụ ụgbọ ala ọzọ.
Ịhazi OEF Nyocha maka Metro Flights Izmir
Usoro nke Ramadan maka Metro Flights na Istanbul
Ọhụụ Afọ Ọhụrụ maka ụgbọ oloko Uludag
Ndokwa Krismas maka ọrụ ụgbọ ala na Bursa
Ndokwa Krismas maka ụgbọ elu Bursaray
Òtù Ọchịchị Ememme maka Ụgbọ njem Bursaray
Nhazi nke Ramadan maka ugbo ala na Malatya
Ememme Àjà maka Mgbasa YHT
Ụgbọ njem na ebe ndị na-adọba ụgbọala maka Ngwá Ọrụ Obodo si Eskişehir Metropolitan